» पुरुषोत्तम लम्सालको धारणा : रामबहादुर बम्जन यसकारण ‘मनोरोगि’ हुन् !
२०७५ पुष १९,बिहीबार १५:०८
काठमाडौं १९ पौष । एउटा केटो ६ महिनाअघि घरबाट हिँड्यो । ६ महिनापछि झ्याप्लांग केश पालेको अनुहार, अस्वाभाविक हुलियामा कतै भेटियो । वरपरकाले ‘तपस्वी’ भनिदिए । सबैले पत्याइदिए । ६ महिनासम्म ऊ कहाँ थियो र कोसँग थियो । कसैले सोधीखोजी गर्ने, जाँच्ने काम गरेनन् ।
केटो महिनामहिनामा पटकपटक गायब हुन थाल्यो । केटोको अस्थिरता र चञ्चलतालाई मान्छेले ध्यानस्थल परिवर्तनको व्याख्या गरिदिए । हराएको बुद्ध भेटियो भनेर देशी विदेशी सञ्चारमाध्यमले फुके ।जसले आफूलाई चिन्नसकेको छैन । त्यसले दुनियाँ चिन्छ भनेर पत्याउने हाम्रो जस्तो समाज अन्त विरलै भेटिन्छ । जति सन्देह बढ्दै जान थाल्यो । त्यति केटोको लीला बढ्दै गयो । स्वाभाविक हो, मात–उन्माद बढ्दै गयो । अहंकार बढ्दै गयो । आफ्नै संगठित झुण्डको बलमा केटो बञ्चरो लिएर गाउँलेमाथि आक्रमण गर्ने हदसम्म पुग्यो, मान्छेले सानो बुद्ध रिसाए भनेर टारे । आक्रामक, अनियन्त्रित, आवेगमा रमाउने बुद्ध नामको भ्रमको साक्षात्कार गाउँलेले गरे तर गाउँलेको वर्णनभन्दा केटोको वरपरको झुण्डको आवाज ठूलो भयो । केटो भन्न थाल्यो, म दैवी कानुनअनुसार कारबाही गर्छु । अनि केटो गाउँलेको समूहलाई नै घन्टौँ अपहरणमा लिने तहमा पुग्यो तर तन्द्रा भंग भएको पत्याएर राज्यको बर्दी भिरेका प्रहरी लुरुलुरु बाटो लाग्यो ।
केटो भविष्यवाणी गर्ने तहमा पुग्यो । दाबी गर्ने तहमा पुग्यो । जसै विषय एवम् सन्दर्भ नजिक आयो, केटो टाप दियो । बेपत्ता भो । सुइँकुच्चा ठोक्यो । केटो भन्न थाल्यो खोयाको बुद्ध ? को बुद्ध ? म मन लागेको गर्ने मान्छे हूँ, तैँले सकेको तँ गर । केटोले दयाको, मायाको, करुणाको, सत्संगको, ध्यानको, जपको, तपको, सांसारिक संसारको, मायावी संसारको, भयको, मुक्तिको न सूत्र दियो, न उपलब्ध सूत्रको व्याख्या दियो न साधन, तैपनि मान्छेले केटो चमत्कारी छ भन्न छाडेन । धेरै सजातीय र थोरै विजातीय समूह केटोको नाममा डम्फू बजाउन अभ्यस्त भयो । केटोको छद्यभेषी आडमा केहीले सृष्टि विनाश हुनबाट बचाउन नयाँ बुद्ध आयो भने, केहीले पत्याए । तिनकै लोलीमा बोली मिलाउने कम भएनन् । जसले पत्याएन, ऊ एक्लिने परिस्थति बन्यो ।